Simba rezvisikwa - Afrikhepri Fondation
Muvhuro, Chivabvu 10, 2021
HNezuro ndakaenda kunofamba mune zvakasikwa, kwete kure nemusha wangu, kungori mupaki mune miti hombe uye yakanaka. Ini ndakatora nzira yakasarudzika ndokutanga kufamba zvishoma nezvishoma, nepfungwa, ndichitarisa Zvisikwa zvakandikomberedza nepfungwa dzangu dzakasvinura.
Ndainzwa zvakanaka, ndichinyatso kuwirirana nezvinhu zvakasikwa zvakandikomberedza: mweya wakandikomberedza, ruzha rweshiri dzichirira nekupepereka kubva pamuti kuenda kumuti, kunhuwirira kwepasi, mashizha, kuratidzwa kwemiti mikuru iyi yemhando dzakasiyana uye akasiyana mavara, mune akati wandei mumvuri wegirini, shava…
Ini ndaive ndiripo zvachose muchiitiko, pasina chinokanganisa (ini ndoda kunongedzera kuti yangu mbozhanhare yanga yadzimwa, muhombodo mangu).
Ndakaona kufamba uku kuchinakidza, pese pandinoenda kumberi ndakawana zvishamiso, ndakatarisa tarisiro padanda remuti uyu nepamusoro peumwe uyu muti, iwo maruva madiki yeyero parutivi penzira, hupenyu hwese.
Zvisikwa hupenyu uye kana isu takanamatira mune ino uye tichienderana neyedu nharaunda nharaunda, tinonzwa zvakanaka nekuti isu tiri chikamu cheZvese.
Ndakaona zvakare kuti ini ndiri chikamu cheZvese. Handina kunzwa kusurukirwa uye kusagadzikana pandakanga ndiri pakati pemiti. Ini ndaitonzwa sekunge ndaive ndakabatana navo. Ndakafunga kuti ndaona kumeso mumiti yemiti uye ndakatozviudza kuti kana tafa, muviri wedu unova guruva uye unova chikamu chevhu uye tobva tafudza miti yacho nekuita kuti ikure. Saka madzitateguru edu chikamu chakakosha chemiti iyi, uye vanoenda nesu muhupenyu uye vanotitarisa. Ichi ndicho chikonzero nei ndainzwa kuva nerunyararo uye ndakachengeteka ndiri pakati pavo!
Kuzvicheka kubva pane zvakasikwa, kutema miti iyi, kuparadza midzi yako, kucheka chinongedzo nemadzitateguru uye kubvisa nzvimbo yaunogara uye nekudaro kubva pachako nekuti SELF IZVOZVI. Saka hongu ini ndinogona chete kukuraira iwe kuti utaure neakasikwa, kunyangwe iwe uchigara muguta. Tarisa kunyura kwezuva kubva pahwindo rako, shiri ichipfuura nedenga, nyatso tarisa muti padivi pemugwagwa, iwe uchaona zvinobatsira panyama yako nepfungwa.
Qelasy, iyo piritsi yekudzidzira inogadzirwa muIvory Coast
Cherechedza Dreamgirls (2006)
Pazera ramakore matatu, akahwina mukwikwidzi "unoshamisa."
Tarisa bhuku reGreen: mumigwagwa yekumaodzanyemba (2018)
Pinda kuti ugovane chinyorwa